Maevatanàna : Mahazo vahana sy miparitaka ny aretina kitrotro - ewa.mg
News - Santé - Maevatanàna : Mahazo vahana sy miparitaka ny aretina kitrotro
Mahazo vahana sy miparitaka ny aretina kitrotro eto amin’ny renivohi-paritra Betsiboka. Ankizy miisa valo eo indray mantsy no tratran’ny aretina kitrotro raha ny tarehimarika navoakan’ny tompon’andraikitry ny fanaovam-baksiny ato amin’ny disitrikan’i Maevatanàna. Ankoatra ireo ankizy madinika latsaky ny dimy taona dia mahita faisana ihany koa ny olon-dehibe, eny fa na dia ireo efa vita vakisiny tamin’ny fahakeliny aza. Raha ny fanazavan’ny mpitsabo iray dia miseho amin’ny alalan’ny fanaviana io aretina io. Mitsororika ranon-delo ilay olona, maharary be ny lohany, manakotsako ny vanin-taolany ary mety hikohaka izy. Mety hitsororika ihany koa ny ranomasony, na menabe ilay maso, izay fantatra fa mety hahajamba na hafaty raha tonga eny amin’ny atidoha. Mety hiteraka tsiranoka any amin’ny atidoha ilay aretina, na mety hampivalana ihany koa raha tsy voatsabo. Manoloana izay dia nisy ny fidinana ifoton’ny nataon’ny mpiasan’ny fahasalamana tamin’ireo sekoly rehetra teto Maevatanàna tampon-tanàna na miankina amin’ny fanjakana na ihany koa tsy miankina. Na izany aza, dia tsy ilay kitrotro loatra no mahafaty fa ireo karazan’aretina manafika ilay marary raha vatany vao midina ny hery fiarovana ao anatiny. Ny fanaovana vaksiny no vahaolana tsara indrindra. Maimaimpoana ny fanaovana izany eny anivon’ireo hopitalim-panjakana, toy ny CSB. Afaka mandray an-tanana ireo marary ihany koa ny fitandroana hatrany ny fahadiovana ary ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana feno hery sy be otrikanina. Nolazain’ity dokotera Felucien ity, hatrany fa tsy tokony hianatra ao anatin’ny 15 andro ny mpianatra voan’ny kitrotro fa manaraka fitsaboina, fa ireo mpiasam-panjakana ihany koa tsy tokony hiasa ao anatin’ny 15 andro rehefa tratran’ny kitrotro. Araka ny fanazavan’ity dokotera ity hatrany dia manomboka amin’ny 07 ora maraina ka hatramin’ny 06 ora sy sasany hariva ny hopitalim-panjakana no tsy mitsahatra ny mandray marary isan’andro.
L’article Maevatanàna : Mahazo vahana sy miparitaka ny aretina kitrotro a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Nivoaka tamin'ny : 01/12/2018
Fahasalamana - Kitrotro - Maevatanana
Les concentrateurs d’oxygène sont généralement peu accessibles aux malades en dehors des établissements de santé. Le Service Médical Interentreprises de Moramanga (SMIMO) vient de bénéficier de deux concentrateurs d’oxygène, remis par la compagnie minière Ambatovy. D’une valeur totale de 13,6 millions d’ariary, ces appareils, remis au mois de mai 2021, vont jouer un rôle vital dans le traitement des personnes atteintes de Covid-19 présentant des formes graves. Ils pourront également être utilisés pour soulager les patients souffrant d’insuffisance respiratoire d’origines diverses. Dans le cadre des contributions d’Ambatovy dans la lutte contre la Covid-19 à Madagascar, la compagnie a également remis, suite à la sollicitation du Service de Santé de District (SSD) de Brickaville, des équipements médicaux composés de flacons de solution hydro-alcoolique, de gants et de masques chirurgicaux. Ces dotations ont également été remises durant le courant du mois de mai. Hanitra R. L’article Insuffisance respiratoire : Deux concentrateurs d’oxygène pour le SMIMO est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Insuffisance respiratoire : Deux concentrateurs d’oxygène pour le SMIMO a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Marolafy, mafy, ela… ny ady
Ady ny fiainana. Mby ao an-tsaina voalohany sy lehibe indrindra amin’izany ny fiatrehana ny isan’andro vaky amin’izay hohanina, hitafiana, hisitrihana… Adim-piainana! Na ady amin’ny fahantrana noho ny maha an-dalam-pandrosoana ny firenena; eny, na lazaina mandrakariva aza hoe manankarena i Madagasikara fa ny vahoaka no mahantra.Ady fiady ny ady amin’ny fahantrana, ady tsy vita, lazon’ady. Manampy trotraka ny ady marolafy, mafy, ela. Maika amin’izany ny tsy fandriampahalemana, anisan’ny antony sy vokatry ny ady amin’ny fahantrana. Ny fahantrana no mahatonga tsy fandriampahalemana? Na ny tsy fandriampahalemana no mampahantra lalina sy maharitra. Tsy mahafa-bela koa ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo na kere, indrindra any amin’ny faritra atsimo. Vao mainka mahalalina sy mampaharitra ny ady amin’ny fahantrana mahasasatry ny miarina isaky ny roa na efa-taona fiverenan’ny mosary noho ny tsy fisian’ny orana. Amin’izao, mitady hanenika ny rehetra ny tsy fahampian-drano. Efa mila hanenika ny rehetra kosa ny ady amin’ny fanolanana sy ny herisetra mifototra amin’ny maha lahy sy ny maha vavy. Tsy nampoizina? Na tsy nampiraika izay ela izay, heverina ho tsy inona. Nefa tena zava-doza fa mamela takaitra sarotra sitranina, manimba ny maha olona… Tsy aiza tsy aiza ny manao heloka fa ny eo akaiky ihany. Mbola tsy foana na resy tosika tanteraka koa ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina covid-19. Eny, na somary nangingina sy toa tsy mahataitra ny maro intsony aza izany tato ho ato. Mety hanao tampody fohy? Na hirongatra tampoka amin’ny hoe andiany faharoa, raha tsy mitandrina. Izany izao no mahazo ny firenen-dehibe sasany.Tsy hita hotanisaina eto ny ady amin’ny kolikoly, ny ady amin’ny fisian’ny tsimatimanota, ny ady tany etsy sy eroa, ny ady amin’ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny harem-pirenena, ny ady amin’ny fanimbana tontolo iainana… Ady tsy efan’ny irery fa mila fahasahiana, firaisankina, fifampitokisana, raha tiana ny handresena ho amin’ny fampandrosoana.Rafaly Nd.L’article Marolafy, mafy, ela… ny ady a été récupéré chez Newsmada.
Avis d’appel d’offre (UGP CASEF/2163A)
Cliquer sur le lien ci-dessous pour télécharger le document. Relance_AVIS_n°_02CF-20_CASEF_-_Insémination_sitewebmidi_05.12.20au12.12.20 L’article Avis d’appel d’offre (UGP CASEF/2163A) est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Avis d’appel d’offre (UGP CASEF/2163A) a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Kitra – «Ligue «A» des nations 2020/2021» : hiray vondrona i Frantsa sy i Portugal
Tontosa, omaly, tany Soisa ny antsapaka amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa «Ligue «A» des nations», ho an’ny taona 2020/2021, taranja baolina kitra. Hiray vondrona indray ao amin’ny sokajy fa­hatelo i Frantsa tompondaka eran-tany 2018 sy i Portugal, tompondakan’i Eoropa 2016. Raha tsiahivina, resin-dry za­reo Portiogey, teo amin’ny famaranana ny Frantsay tamin’ity fifaninanana eoropeanina ity ka eto izany no hanala vela ry Mbappé sy i Pogba. Anisan’ny fihaonana mbo­la hangotraka ihany koa ny ao amin’ny sokajy fahefatra iarahan’i Soisa sy i Espaina ary i Alemaina. Hanomboka ny 4 septambra ka hatramin’ny 18 novambra 2020 ny lalao fifanintsanana. Any amin’ny andro fahatelo, vao hidona i Frantsa sy i Por­tugal, ho an’ny sokajy fa­hatelo. Avy hatrany kosa dia hi­katroka i Alemaina sy i Espaina eo amin’ny andro voalohany ho an’ny sokajy misy azy ireo.TompondakaSokajy «1» : Italia, Polonina, Pays-Bas, Bosnie-Herzegovine Sokajy «2» : Danemark, Islande, Angletera, Belzika Sokajy «3» : Frantsa, Soeda, Portugal, Kroasia Sokajy «4» : Soisa, Alemaina, Okrainina, EspainaL’article Kitra – «Ligue «A» des nations 2020/2021» : hiray vondrona i Frantsa sy i Portugal a été récupéré chez Newsmada.
Nahazo « maison digital » ireo vehivavy ao Ambositra. Voalohany ao amin’ny kaominin’Ambositra ary faha 36 manerana an’i Madagasikara ity « maison digital » ho an’ny vehivavy ao Ambositra ity. Fiarahamiasan’ny ONG Manarina sy ny Orange solidarité Madagascar no nahavitana izao fotodrafitrasa izao. Iray amin’ny fandaharan’asan’ny « fondation Orange » ny « maison digital » ho an’ny vehivavy. Tanjona amin’izany ny hahafahan’ny vehivavy hikirakira ny resaka nomerika ary ny hahazon’izy ireo mba hisehatra amin’ny fandraharahana. Omena fiofanana ireo vehivavy ao amin’ny kaominina izay tsy andoavam-bola. An-jatony ireo vehivavy hisitraka izao fotodrafitrasa izao ao amin’ny kaominin’Ambositra. Ao anatin’ny fiofanana ny fampianarana mamaky teny sy manoratra, ny fahaiza-mitantana ary ny fikirakirana ireo rindrambaiko isan-karazany. Nandritra izao fitokanana izao no nanoloran’ny fikambanana orange solidarité Madagascar tamin’ny alalan’ny filohany, Benja Arson ireo kits numeriques toy ny tablette, serveur Raspberry, imprimante, video projecteur, cles USB ary ordinateurs portables. Nanomboka ny taona 2015 ka hatramin’izao dia miisa 36 ireo « maisons digitals » ary vehivavy arivo no nahazo tombotsoa. Teo ny fanarenana « village orange » Manakanda ao amin’ny kaominina ambanivohitra Ankerana, distrkta Ambohimasoa. Marihana fa anisan’ny ireo voalohany tamin’ireo « village orange » teto Madagasikara ny taona 2014 niatomboan’ny tetikasa. Niarahan’ny orange solidarité Madagascar tamin’ny fikambanana Madamoramora ny nanatontosana an’izany. Tamin’izao fanavaozana izao kosa dia niarahana tamin’ny fikambanana LookGasyAventure nitondra ny hevitra sy fiarahamiasa amin’ny fikambanana Madamoramora. Ny fanamboarana sy fanarenana kosa dia niantsoroan’ny orange solidarité Madagascar. Nisy ny fanamboarana sekoly vaovao sy fanavaozana ny ireo fitaovana mitondra ny herinaratra isan-karazany. Ra-Nirina Cet article ORANGE SOLIDARITE MADAGASCAR : Ao Ambositra ny « maison digital » faha 36 est apparu en premier sur déliremadagascar.L’article ORANGE SOLIDARITE MADAGASCAR : Ao Ambositra ny « maison digital » faha 36 a été récupéré chez Délire Madagascar.
Fampianarana ambony: nomen’ny MCU torolalana ireo mpianatry lycée
Anisan’ny nisongadina ho an’ny eo anivon’ny Tranoben’ny serasera, eo anivon’ny oniversite (MCU), tamin’ny volana janoary lasa teo, ny fidinana eny ifotony. Nampahafantatra sy nanome torolalana momba ireo toeram-pianarana sy fiofanana ho an’ireo mpianatra eny anivon’ny lycée, aorian’ny fahafahana ny fanadinana bakalorea izy ireo tamin’izany. Nisitraka izany ny mpianatra teny amin’ny lycée Ambohimambola sy ny eny Talata-Volonondry ary Ambalavao. « Tanjona ny hampahafantarana dieny mbola eny anivon’ny kilasy faharoa ka hatrany amin’ny kilasy famaranana ireo tolotra momba ny fiofanana eny anivon’ny oniversite, hahafahana mampihena ny fialana an-daharana ireo mpianatra eny amin’ny ambaratonga ambony », hoy ny talen’ny MCU, Fanjanarivo.Asa ahazoana antoka ny ho avyEzahina ny hijeren’izy ireo sahady ny asa mety hataony hahazoany antoka ny ho aviny. Nampahafantarina tamin’izany fa ahitana sampam-piofanana sy fianarana marobe ny eny anivon’ireo oniversite enina. Anisan’izany ny fitsaboana, ny siansa, ny lalàna, ny siansa politika, ny fambolena, ny serasera sy ny fifandraisana…Tsiahivina fa miisa 888 ireo mpianatra nanaraka izany torolalana izany tamin’ireo lycée telo ireo.Synèse R.L’article Fampianarana ambony: nomen’ny MCU torolalana ireo mpianatry lycée a été récupéré chez Newsmada.
Fiarovana ny tontolo iainana: miara-miasa ny Diredd sy ny Tafika
Nanao fitsirihana ifotony tany amin’ny distrikan’i Mahajanga II ny ekipan’ny fileovana iraisam-paritry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy Boeny Betsiboka, notohanan’ny Blueventures. Misy ny fanapahana ala honko (200), nohamarinina sy nanaovana fanadihadian’ireo tompon’andraikitra fanadihadiana manokana ka nandraisana fepetra ny tsy hiverenan’izany intsony. Hitan’izy ireo koa fa mirongatra ny doro tanety sy ny doro ala ka rehefa natao ny fanadihadiana, vokatry ny famokarana arina fandrehitra, tsy nahazoana alalana, sy ny afon-kijana tsy voafehy ny fototr’izany. Vokatr’izany doro tanety izany, tandindonin-doza ny fizahantany izay mampidi-bola be ho amin’iny faritra iny, toy ny lavabato ao Anjohibe. Mihena koa ny habetsaky ny rano eo amin’ny riandrano Mahafanina. Nisy ny toromarika nomena ny VOI Sambatra Antanamarina, mpitantana iny faritra iny, ny tokony hanaovana aroafo sy ny fisafoana matetika ka hamonoana ny afo raha misy izany ary ny hanohizana hatrany ny fambolen-kazo. Ny “Eden Project”, miara-miisalahy amin’ny VOI sy Diredd Boeny-Betsiboka ka mamboly zana-kazo 400 000 fototra isan-taona ao Antanimarina. Eo koa ny fiaraha-miasan’ny Tafika malagasy sy ny Diredd ahafahana mametraka miaraka tany tan-dalàna amin’ny fiarovana ny tontolo iainana.Jean ClaudeL’article Fiarovana ny tontolo iainana: miara-miasa ny Diredd sy ny Tafika a été récupéré chez Newsmada.
Fironan’antoko :: Manamafy ny fanohanany ny Filoha ny Freedom
Nanao fanambaràna maneho ny fanamafisany ny fanohanana ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, miaraka amin’ny vinam-pampandrosoany ny antoko Freedom, tarihin’ny minisitry ny Kolontsaina sy ny serasera, Andriatongarivo Lalatiana. Maneho ny fiombonan-keviny momba ireo fepetra noraisin’ny Filoha amin’izao ady amin’ny valanaretina Covid19 izao ny antoko, sady mandrisika ny Malagasy rehetra mba hitandrina sy hanaja an’ireo fepetra sakana ry zareo mpikatroka mba tsy hiverenana amin’ny fihibohana indray. Voarakitra ao anatin’ny fanambaràna novakian’ireo mpikamban’ny Freedom, tetsy amin’ny Villa Pradon, Antanimena, omaly, kosa ny fitsipahana ny teti-dratsin’ireo olona ivelan’ny fitondrana, eny fa ny ao anatiny aza, amin’ny fanilihana an’ireo mpikambana amin’ny rafitra mpanatanteraka, ka isan’ny nasehon’izy ireo ny fanohanany an-dramatoa minisitra izay sady mpitarika ny antoko. L’article Fironan’antoko :: Manamafy ny fanohanany ny Filoha ny Freedom est apparu en premier sur AoRaha.